Uyilo Olumanyeneyo | January 2022
Ukuntywila Kwivenkile Yehb
Iingcamango Zokulala Zabantwana
Ikhaya Lonke: Zolile
Izitayile Zendlu Ezaziwa Kakhulu Emelika
Amalaphu kaJoAnn anika abaThengi izixhobo zasimahla zokwenza iimaski zobuso kwizibhedlele
IJoAnn Fabric kunye neeVenkile zoBugcisa zinika iikiti zasekhaya zokwenza imaski zasimahla ukuze abantu bazigqibe kwaye banikele kwizibhedlele.
Uyenza njani iMask yobuso ngaphandle kokusebenzisa i-Elastic ngexesha leCoronavirus
Iqela kumenzi welaphu u-Thibaut, onabasebenzi bakhe bebesenza le veki yonke, basibonisa indlela yokwenza imaski yobuso kwilaphu kumatshini wokuthunga okanye ukusebenzisa inaliti kunye nomsonto.
UMitchell Gold + uBob Williams's North Carolina Factory ngoku wenza iiGown zeSibhedlele
Umenzi wefanitshala yinkampani yamva nje yokunyuka ukusombulula ukunqongophala kwePPE.
Nantsi indlela oYila ngayo uBuyiso ngexesha leCoronavirus
Ukusuka ekunikeleni iimaski ukwenza ifanitshala, iinkampani zoyilo ziyenyuka.
Iimaski ze-DIY zaBasebenzi bezeMpilo: Bhalisela ukwenza iiMaski ngoku ngeStitchroom
U-Ella Hall, umsunguli we-Stitchroom yokuqalisa, wabona unxibelelwano phakathi kwezi zinto zimbini-kwaye wagqiba kwelokuba athathe amanyathelo. Ukuqala kwiveki ephelileyo, iHolo isungule inyathelo lesigqumathelo se-DIY, ikhuthaza nabaphi na abenzi bexesha elingenamsebenzi ukwenza iimaski zokuzisebenzisa ngexesha lobhubhane, besebenzisa iphethini (ukusuka ku-freewewing.org) eyabelwe iHolo kwiwebhusayithi yeStitchroom.
UBenjamin Moore kunye neNational Trust yoLondolozo lweeNdawo eziHlangeneyo eziQhagamshelwe kwiMbali yaBasetyhini
Bona amandla engubo entsha yepeyinti.
I-LEGO yenza iIsoeld Shield kubasebenzi boNyango baseDenmark
I-LEGO ibhengeze nge-Instagram ukuba yenza amakhaka obuso kubasebenzi bezonyango eDenmark. Umzi mveliso wayo iBillund unokwenza ngaphezulu kwe-13,000 visors ngosuku.
Ukuthengiswa kweDepho yasekhaya yeeMaski ezingama-N95, kwaye ngaba ubanikela kubasebenzi bezempilo
I-Depot yaseKhaya iyekise ukuthengisa iimaski ze-N95 ukuba zinikelwe ezibhedlele, ababoneleli ngezempilo kunye nabaphenduli bokuqala abajamelene nokunqongophala kwezixhobo zokuzikhusela.
I-Serta Simmons Ibhedi yokuNikela ngeeMatrasi ezili-10 000 kwizibhedlele zaseNew York City
Ukunceda ukujongana nokunqongophala kweebhedi zesibhedlele kwisiXeko saseNew York, uSerta Simmons Bedding ubambisene neRelief Bed International ukunikela ngoomatrasi abangama-10 000 kwizibhedlele ze-NYC.
USchumacher unikela ngaphezulu kweewadi ezingama-600 zelaphu elenziwa ngokwenza iMask kunye nokunye
Njengobhubhane we-coronavirus oqhubeka nokusasazeka kwilizwe liphela, iinkampani nabantu bayenyuka bebonelela ngezixhobo kunye nokunikezelwa kwabasebenzi bezempilo kunye nabanye abasweleyo. I-Schumacher, indlu yendlu ebonakalayo, yeyokugqibela yokuhlanganisa inkampani ukuba incede.
uvuyo lombulelo charlie brown
ngaphandle kwemithi yekrisimesi
blake shelton kunye no gwen steffani